Survival ဂိမ်း၊ Xiaomi ၏ PUBG နှင့် Fortnite ရင်ဆိုင်ရမည့်ဂိမ်း | Androidsis
အာရုန်သည် Rivas | | Fortnite, Android ဂိမ်းများ, NOTICIAS, Xiaomi က
Battle Royale ဂိမ်းများသည်ပြီးခဲ့သည့်နှစ်ကစမတ်ဖုန်းများကိုမုန်တိုင်းထန်စေခဲ့သည်။ PUBG လိုမျိုးအားကစားများ -aရရှိသည် ဟယ်လိုဝင်းအသစ် update ကို- Y Fornite ၎င်းတို့သည်မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုသူများအကြားတွင်အလွန်လူကြိုက်များခဲ့သည်။ Xiaomi ကဲ့သို့အချို့သောထုတ်လုပ်သူများကဤကြီးထွားလာနေသောစျေးကွက်တွင်လက်များကိုညစ်ပတ်ရန်မဆုံးဖြတ်မီအချိန်ကသာကိစ္စဖြစ်သည်။ ဒီတစ်ကြိမ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတရုတ်ကုမ္ပဏီတစ်ခုကနေစစ်ပွဲဆင်နွှဲတဲ့တော် ၀ င်ဂိမ်းအသစ်တစ်ခုကိုရနေပြီ၊ အဲဒါကို Survival Game လို့ခေါ်တယ်။
မကြာသေးမီကကုမ္ပဏီသည်၎င်း၏ဖိုရမ်များမှတဆင့်ကြေငြာခဲ့ပြီး၎င်း၏ပိတ်ထားသော beta အတွက်အက်ပလီကေးရှင်းများကိုပင်စတင်ယူခဲ့သည်။ စိတ်ကူးသည်လူကြိုက်များသောဂိမ်းများနှင့်အလွန်ဆင်တူသည်ပြီးသားဖော်ပြခဲ့တဲ့သူတွေလိုပဲ။ ငါတို့သည်သင်တို့ချဲ့ထွင်!
ရှင်သန်ရပ်တည်ရေးဂိမ်းသည်ကစားသမားများစွာနှင့်တစ် ဦး နှင့်တစ် ဦး ယှဉ်ပြိုင်ခြင်းဖြင့်စတင်သည်။ နောက်ဆုံးကစားသမားရပ်နေသည်အနိုင်ရ။ ဒီဂိမ်းမှာအသုံးပြုသူကိုနှစ်သက်စေမယ့်သိပ္ပံဝတ္ထုတွေအများကြီးရှိပါတယ်။ ဂိမ်း သင်၌ရှိသောအရာနှင့်ဇာတ်ကောင်ချင်းစီအတွက်ပျံသန်းနိုင်စွမ်းကဲ့သို့သောစွမ်းဆောင်ချက်များကဂိမ်းကိုစိတ်ဝင်စားစရာဖြစ်စေမည်။ Xiaomi ကဂိမ်းကိုအောက်ပါအတိုင်းရှင်းပြခဲ့သည် -
ဂိမ်းတစ်ခုစီသည်အာကာသယာဉ်မှမြေပုံanရိယာသို့ပျံသန်းသောကစားသမားများနှင့်စတင်သည်။ ကစားသမားများသည်စစ်မြေပြင်တွင်မည်သည့်အချိန်နှင့်မည်သည့်နေရာတွင်ရောက်ရှိမည်ကိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။ အရင်းအမြစ်များအားလုံးအားမြေပုံမှရှာဖွေပြီးထုတ်ယူနိုင်ပြီးကစားသမားများက၎င်းတို့၏ပြိုင်ဘက်များကိုအချိန်မရွေးတိုက်ခိုက်နိုင်သည်။ နောက်ဆုံးရပ်တည်ချက်အနိုင်ရပါလိမ့်မည်!
Xiaomi ၏တိုက်ပွဲတော်ဝင်ကစားပွဲအသစ်ဖြစ်သည် မျိုးစုံအဆင့်ဆင့်အပေါ် optimized ဖြစ်ပါတယ်။ ဆိုလိုတာကဒီဂိမ်းဟာချောမွေ့ပြီးချောချောမွေ့မွေ့ကစားခြင်းကိုသေချာစေဖို့ဒီနေ့ဈေးကွက်ကိုစမတ်ဖုန်းအမျိုးမျိုးမှာစမ်းသပ်နေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ bug တွေ မည်သည့်မျိုးကိုမဆို မည်သို့ပင်ဆိုစေကာ, ကုမ္ပဏီအနေဖြင့်တိကျသောထုတ်ကုန်များအတွက်အထောက်အပံ့ကိုထုတ်ဖော်ပြသရန်မရှိသေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပိတ်ထားသော beta အဆင့်သို့ ၀ င်လာသည်နှင့်အမျှအနီးရှိစီးပွားဖြစ်ပစ်လွှတ်မှုအကြောင်းပိုမိုသိရှိရန်အနည်းဆုံးရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်စောင့်ဆိုင်းရမည်။
အဆိုပါဖိုရမ် post ကိုဂိမ်းတစ်ခု preview ကိုမျက်နှာပြင်နှင့်တကွကြွလာ။ Survival Game သည် PUBG (သို့) Fortnite ကဲ့သို့သောပို့စ်များနှင့်ယှဉ်ပြိုင်နိုင်သလားဆိုသည်ပြောရန်ခက်ခဲသည်Xiaomi ကဲ့သို့ကုန်အမှတ်တံဆိပ်မှဆင်းသက်လာသောကြောင့်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းသောအင်္ဂါရပ်များနှင့်ဂိမ်းရွေးချယ်မှုများကိုမျှော်လင့်ရသည်။ Xiaomi သည်၎င်း၏ပိတ်ထားသော beta စမ်းသပ်မှုအတွက်လျှောက်လွှာများကိုလက်ခံခဲ့သည်၊ သို့သော်ထိုကာလကျော်လွန်သွားသည်။ ပေးထားသောဂူဂဲလ်ပုံစံသည်တုန့်ပြန်မှုများကိုလက်ခံခြင်းကိုရပ်တန့်လိုက်သည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့သည်နောက်ဆုံးရက်မတိုင်မီများစွာသောလျှောက်လွှာများရောက်ရှိခဲ့ခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Androidsis ပါ » NOTICIAS » PUBG Mobile နှင့် Fortnite စတိုင်ဖြင့် Xiaomi ၏ဂိမ်းသစ် Survival Game
Shining Force၊ ဂန္ထဝင်တစ် ဦး ၏ပြန်လာခြင်းနှင့်၎င်းကိုမည်သို့မလုပ်ဆောင်နိုင်သနည်း
Android အတွက် Google Chrome အကောင့်အသစ်ထည့်နည်း